Thwebula Core Temp 1.15 – Vessoft
WindowsUhleloUkuhlola nokuxilongwaCore Temp
Isigaba: Ukuhlola nokuxilongwa
Ikhasi elisemthethweni: Core Temp
I-Temp Tempore – Umbuso omncane wokuqapha izinga lokushisa lokucubungula esimweni sangempela sesikhathi. Isofthiwe ingabonisa idatha yokushisa yeprosesa ngayinye ohlelweni futhi ngayinye ifaka phakathi. I-Tempore Yesikhashana inikeza izici eziphambili zeprosesa njengomodeli kanye nohlobo lweprosesa, inombolo yezinhlamvu, isivinini sewashi, i-CPUID, i-TDP, ipulatifomu, njll. Isofthiwe iqukethe amathuluzi okwandisa ukuvimbela okuzenzakalelayo kwe-CPU nokushisa nokusetha izaziso icala lokufinyelela ekushiseni okubucayi. Futhi i-Core Temp isekela ukuxhumeka kwama-plug-ins kusuka kubathuthukisi benkampani yangaphandle ukukhulisa ukusebenza kwayo siqu.
Ukuqapha izinga lokushisa kweprosesa ngayinye nenhloko
Ibonisa izici zeprosesa
Ukushisa izilungiselelo zokuvikela
Setha amawindi e-pop-up
Usekela i-Intel, AMD ne-VIA
Thwebula Core Temp
Amazwana ku Core Temp
Core Temp software ehlobene
Isofthiwe kwandisa ukusebenza kwe-computer yakho ngokubheka ubungozi uhlelo, ukuhlanza lokubhalisa kanye defragmenting disk hard.
I-MSI Afterburner – ithuluzi elisebenzayo ukumisa nokuqapha amakhadi wehluzo avela kunjiniyela abahlukahlukene. Isoftware ikuvumela ukuthi uguqule ezinye izilungiselelo uphinde usheshise ikhadi lemifanekiso.
I-CPU-Z – isoftware inquma idatha yobuchwepheshe bezakhi zekhompyutha. Umbuso usekela umsebenzi ngezinhlobo eziningi zezakhi eziyinhlanganisela.
I-GPU-Z – isoftware yokuqoqa imininingwane enemininingwane mayelana nekhadi levidiyo, iprosesa, ikhadi lemifanekiso nezinye izinto. Isoftware inika amandla ukubuka nokuhlola umthwalo ku-processor yehluzo.
I-Hetman Partition Refund – indlela elula yokubuyisa amafayela asuswe ngengozi noma alahlekile. Isoftware isekela inani elikhulu lezinto ezahlukahlukene zohlelo lokuvuselelwa kwedatha.
I-AVG Sula – isisetshenziswa senzelwe ukususa yonke imininingwane ehlobene nezinhlelo ze-AVG, kufaka phakathi okufakiwe kokubhaliwe, abashayeli namafayela wokufaka.
Lesi yisibuyekezo somculo kanye nesikhathi esifanayo somhleli wevidiyo nesethi yezinto eziwusizo nezihlungi ezahlukene nemiphumela.
I-Hearthstone – umdlalo wekhadi kuhlobo lwecebo. Umdlalo unesethi yamakhadi omlingo namaqhawe adume ngomkhathi we-Warsters.